Bulshada Valencian waxay xiiseyneysaa faa iidooyinka ay bixiso adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee xaaladaha deg degga ah | Qalabka bilaashka ah
Ka dib bilooyin maxkamad la soo taagay, taliyayaashii Comunidad Valenciana waxay gaareen heshiis aan horay loo arag Spain, wax bishii Juun ee la soo dhaafay macno ahaan u horseeday inay ansixiyaan wax ka badal heer gobol ah oo loogu talagalay Qorshaha Degdega ah ee Territorial oo ay ku jiraan borotokoolka ay u adeegsan doonaan hay'adaha ay khuseyso adeegsiga diyaaradaha bilaa duuliyaha ah xaalad deg deg ah.
Thanks to dhaqdhaqaaqan waxaan ognahay sida ay masuuliyiintu ugu dhaqmaan Jaaliyada Valencia, marka ugu horeysa, in loo ogolaado inay ku dul duulaan aaga faragelinta oggolaansho hore oo ka timid agaasimaha Boostada Taliska Forward. Haddii ay dhacdo in cutubyo kale ay dul heehaabayaan aagga, kooxda oo dhan, oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxay qeyb ka noqon doonaan Qeybta Aasaasiga ah ee Isu Duwida Diyaaradaha iyo / ama Kheyraadka Hawada.
Bulshada Valencian waxay abuurtaa sharci u gaar ah oo ay ugu adeegsan karto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xaaladaha deg-degga ah
Sharcigan cusub waxaa dejiyay wax aan ka yareyn Israa'iil Quintanilla, shaqaale ka tirsan waaxda injineernimada Kartografiyada ee Jaamacadda Polytechnic University of Valencia. Dhinaceeda, waa in la aqoonsadaa in horumarinteeda iskaashi ee Jose Maria Oliet, oo ka tirsan hoosaad-hoosaadka guud ee Siyaasadda Kaymaha ee Mapama oo mas'uul ka ahayd wadaagista casharradii ugu dambeeyay ee laga bartay isticmaalka drones-ka ee dabka kaynta.
Sida lafilayo, runtu waxay tahay in mas'uuliyiinta ay khuseyso, eeg tusaale ahaan kooxaha dab-damiska, booliska, ilaalada madaniga ah, ilaalinta madaniga ah ... ayaa aad uga daneynaya inay awoodaan adeegsiga noocan ah teknoolojiyada cusub ee wax badan ka balan qaadaya howlaha noocan ah , isku mid ah, kiiskan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, oo noqon kara caawimaad aad u weyn mahadsanid waxay bixin kartaa aragti gebi ahaanba ka duwan tan caadiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » Bulshada Valencian waxay xiiseyneysaa faa iidooyinka ay bixiso adeegsiga drones-ka xaaladaha deg-degga ah